လူ့အာရုံကြောသိမှတ်မှုအသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ - လက်တွေ့၊ မျိုးရိုးဗီဇနှင့် ဦး နှောက်ပုံရိပ်သည် impulsivity နှင့် compulsivity ၏ဆက်စပ်မှုများ (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
CNS Spectr ။ 2014 Feb;19(1):69-89။ Doi: 10.1017 / S1092852913000801 ။
Fineberg NA1, ချိန်ဘာလိန် SR2, Goudriaan AE3, Stein DJ သမား4, Vanderschuren LJ5, Gillan CM6, Shekar S က1, Gorwood PA ဆိုပြီး7, Voon V ကို6, Morein-Zamir S က6, Denis: D8, Sahakian BJ2, Moeller အပြည်ပြည်သွား9, Robbins TW6, Potenza MN10.
Impulse နှင့် compulsive cortico-subcortical circuitry ၏ neuroanatomically နှင့် neurochemically ကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများကကမကထပြုခဲ့သည့် dissociable သိမြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါဝင်ကြောင်းအသုံးဝင်သော Conceptual, ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးသမိုင်းကြောင်းအ Impulse ထိခိုက်မှု-ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အတူအန္တရာယ်-ရှာခြင်းနှင့် compulsive နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိအတူလုံးဝဆန့်ကျင်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်သူတို့က ပို. ပို. အတှေးနှင့်အပြုအမူများအလုပ်မဖြစ်တားစီးပါဝင်သော shared neuropsychological ယန္တရားများအားဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဖြစ်သည်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့ရွေးချယ်, ထကြွလွယ်သော compulsive နှင့်စွဲလမ်းမမှန်များ၏ pathophysiology ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးနှင့်သုတေသနအသစ်လမ်းညွန်ညွှန်ပြနိုင်ရန်အတွက်လူသားများတွင် Impulse နှင့် compulsive ၏ neurocognition ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု, အသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပြန်လည်သုံးသပ်။